आश्रममा फक्रिदै गरेको जीवन, मानव सेवा आश्रम आर्थिक अभावमा - Tulsipur Online
आश्रममा फक्रिदै गरेको जीवन, मानव सेवा आश्रम आर्थिक अभावमा
Posted by News Desk | २२ भाद्र २०७८, मंगलवार ०९:५७ |
२२ भदौ/ क्रान्ति कुमारीलाई मानव सेवा आश्रमले गएको बैशाखमा तुलसीपुरको बसपार्कबाट अलपत्र रहेको अवस्थामा उद्दार ग¥यो । उद्दार गरेर आश्रममा लगेर चेक जाँच गराउँदा उनी ८ महिनाको गर्भवती भएको पत्ता लाग्यो । आश्रममा लगेको करिव डेढ महिनापछि उनले आश्रमै छोरालाई जन्म दिईन् । अहिले उनको छोरा चार महिनाको भई सकेको छ । आफ्नो घर भारतको गोरखपुर बताउने उनी त्यस बाहेक अरु केही जानकारी दिन सक्दिनन् । छोरा जन्मेपछि उनी आफ्नो छोरालाई हेर्न पनि चाहदैन थिन् ।
तर उनलाई चिकित्सको सल्लाहअनुसार पाँच दिनसम्म औषधि दिए पछि भने उनी अहिले राम्रो संग आफ्नो छोरोको स्याहार सुसार गर्न सक्ने भएकी छिन् । खासमा क्रान्तिलाई सिजियो फेनिया अर्थात डिपे्रशनको सबै भन्दा माथिल्लो तहको समस्या छ तर उनको बच्चा सानै भएकाले डिप्रेशन सम्बन्धि औषधि दिदाँ बच्चालाई आमाको दुधबाट औषधि जाने भएकाले डिप्रेशनको औषधि खुवाईएको छैन् । आश्रममा क्रान्तिले छोरालाई जन्म दिएपछि आश्रमको लागि पछि केही गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ क्रान्तिको छोराको नाम भरोसा राखिएको छ । त्यस्तै रुकुमकी अम्रिता केसी पनि मानसिक रोगी थिईन् ।
मानसिक मसस्याले ग्रसित भएपछि उनी तीन बर्षसम्म सड्क पेटीमै बसिन् । त्यसपछि उनी एकान्त एक्लै जंगलमा बस्ने गर्थिन । जंगलमै कसैले उनीलाई यौन शोषण ग¥यो । त्यसपछि उनी जंगलमै छोरीलाई जन्म दिईन । उनलाई जंगलमा स्थानीयले देखेपछि अस्पताल पु¥याए । उनलाई छोरी जन्मेको १३ दिन पछि त्यहाँको स्थानीय सरकारको सहयोगमा उनी तुलसीपुरमा रहेको मानव सेवा आश्रममा आई पुगिन् । अहिले आश्रममै बसेर उनी छोरीलाई हुर्काउँदैछिन् ।
अहिले उनको छोरी पाँच महिनाको भएकी छिन् । उनको छोरीको नाम आशा राखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का गंगाराम विकलाई पनि आश्रमले तुलसीपुर बसपार्कबाट एकदमै नाजुक अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो । पुरै शरिर सुन्निएको बिरामी अवस्थामा उनलाई उद्दार गरि आश्रममा लगेर सरसफाई औषधि उपचार गरेपछि अहिले उनको अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ ।
अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको मानव सेवा आश्रममा ३२ जनाले आश्रममा आश्रय लिएर बसेका छन् । जसमध्ये २० जना महिला र १२ जना पुरुष रहेका छन् । खासमा आश्रममा घरपरिवार नभएका सार्वजनि स्थल, सडकपेटी, मन्दिरहरुमा बस्ने धेरै जसो मनोरोगीहरु रहेको मानव सेवा आश्रम तुलसीपुरका संयोजक उर्विन सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गरि कोही चाहि घरमा बस्न नचाहेर, बस्न नसकेर घरबाट निस्किएका वृद्धवृद्धा रहेको संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए । धेरै जसो २० देखि ५० बर्ष नपुगेका मनोसामाजि समस्याबाट ग्रसित भएको व्यक्तिहरु आश्रममा रहेको उनको भनाई छ । आफूहरु सडकबाट लिएर आएपछि पहिला सरसफाई गरेर साईक्याट्रिक डाक्टरहरुलाइ बोलाएर तत्काल डा.आउन नसकेपछि भिडियो कल गराएर उनीहरु उनीहरुको समस्याका बारेमा जानकारी दिएर औषधि चलाउने गरेको सापकोटाले जानकारी दिए । सबैको मुठ्ठी सहयोगबाट संस्था चलेकाले स्थानीय डाक्टरहरुले निःशुल्क चेकजाँच गरि दिने गरेको उनको भनाई छ ।
आश्रममा रासनको लागि जन्मदिन पर्ने, पित्रि सम्झना लगायत सेवा भावले विभिन्न व्यक्तिहरुले खाद्यान्न सहयोग गर्ने भएकाले यसरी खाद्यान्नको व्यवस्था भईरहेको संयोजक सापकोटाले बताए । त्यसका साथै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही महिनालाई पुग्ने राशनहरु उपब्ध गराउँदै आएको उनको भनाई छ ।
घर भडा बुझाउँन आर्थिक समस्या
घर भाडा लिएर आश्रम संचालन भई रहेको छ । घरको मासिक रुपमा ७० हजार र अर्को जग्गाको मासिक ८ हजार भाडा बुझाउँदै आएको छ । घरभाडा र बत्तिको पैसा तिर्न एकमदै समस्या भएको संयोजक सापकोटाले बताए । मासिक रुपमा आश्रम भाडा बुझाउँन समस्या भएकाले सहयोग जुटाउने भनेर अगाडी बढेको भएपनि कोभिडको कारणले जनमानस सम्म पुग्न समस्या भएकाले मानव सेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालयको सहयोगमा दाङको आश्रम चलेको उनको भनाई छ । तर केही समस्या भएपनि आफुहरु मानवको सेवा तयार रहेको उनको भनाई छ । त्यसका साथै आश्रममा रहेको व्यक्तिहरुको स्याहार सुसार गर्न जनशक्तिको पनि अभाव रहेको उनले बताए । दाङमा कार्यालय स्थापना भए संगै चारजनालाई परिवार संग पुर्ण मिलन गारईएको छ भने दुई जनाको कार्यालयमै देह त्याग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट अहेवको व्यवस्था
मानव सेवा आश्रम तुलसीपुरको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक जना अहेवकोे व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले नै पारिश्रमिक उपब्ध गराएर रुकुमपुर्व घर भएकी मानुषी खड्कालाई आश्रममा रहेका नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सेवा दिनको लागि खटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा करारमा नाम निकालेकी खड्का आश्रममा आश्रित नागरिकहरुलाई समय समयमा औषधि सुवाउनुका साथै अस्पताल लैजाने र उनीहरुका लागि खाना बनाउने, खुवाउने र सरसफाई लगायतको काम समेत गर्दै आएकी छिन् । यसरी असाहयहरुको सेवा गर्दा एकदमै खुशी लाग्ने गरेको सुनाईन् ।
अहिले आश्रममा दाङ लगायत रुपन्देही, कपिलकस्तु, बर्दिया, बाँके, रुकुम सल्यान, रोल्पा लगायतका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
Previousशान्तिनगरमा आत्मरक्षा तालिम
Nextसरकारले पूर्णता कहिले पाउने ?